Yaa Yiri Musqulaha Yaryar Ma Noqon karaan Dhammaad Sare? 11 Siyood Oo Looga Dhigo Ka Weyn Oo Qurux Badan - Tubooyinka Jikada Ugu Wanaagsan 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / blog / Yaa Yidhaahda Musqulaha Yaryar ma noqon karaan kuwo aad u sarreeya? 11 Siyaabood Oo Aad Ugu Weyn U Qurux Badan Tahay
Yaa Yidhaahda Musqulaha Yaryar ma noqon karaan kuwo aad u sarreeya? 11 Siyaabood Oo Aad Ugu Weyn U Qurux Badan Tahay
2021 / 09 / 18 Qoondayntablog 1594 0
Sida loo qurxiyo musqusha oo leh qiime sare iyo meel yar? Ma sahlana in musqusha, armaajooyinka musqusha, saxamadaha, qubeyska lagu qubeysto musqusha, iskaba daa in laga hadlo nooca casriga ah? Dhab ahaantii, maahan, ilaa intaad si xariif ah u qaabaynayso alaabta musqushaada, musqulku uma ekaan karo mid aad u sarreeya laakiin sidoo kale si buuxda ayuu u shaqaynayaa, waxaad sidoo kale heli kartaa meel bannaan oo aad u dabacsan.
Wareejinta booska musqusha
Ka wareeji musqusha goobteedii dhexe ee caadiga ahayd una beddel “saddex -xagalka la illaaway” ee musqusha. Xusuusnow markaad musqusha ku jirto, iska ilow markaad mashquulsan tahay, oo sare u qaad boosaska laga heli karo musqushaada. Habkan ma jiri doonto xaalado laga xishoodo oo musqusha ay tahay “indho -indho” ama “wax lagu turunturoodo”.
Haddii aad dareento in saxanka sagxaduhu yahay meel aad u xoog badan, isku day inaad dejiso saxanka darbiga ku rakiban. Ku habboonaanta 180 ° derbiga ama 90 ° xagal darbiga, jebinaya qaabkii oval -dhaqameedka.
Waxaad dooran kartaa jir qaab-dhismeed ama afargeesle ah oo ku habboon meesha bannaan, oo leh nidaam biyo-mareen derbi ku dhisan. Qasabadda yar iyo tan cusub waxay u muuqataa mid fudud oo xaddidan. Musqushaan waxay u egtahay mid cusub oo hal abuur leh.
Meesha yar ee musqusha, qaab-dhismeedka derbiga ayaa sidoo kale ku habboon qasabadaha. Isticmaalka ugu badan ee dadka ku jira musqusha maalintii waa qasabadda, sidaas darteed meesha bannaan ee ku xeeran saxanka qasabadda waa mid aad muhiim u ah. Ku rakibidda qasabadaha darbiga ku rakiban waxay badbaadin doontaa boos waxayna musqusha ka dhigi doontaa mid aad u dheer marka lagu daro badbaadinta booska.
Dheereynta golaha musqusha
Haddii aad yaraysid cabbirka kabadhka musqusha, waxay hoos u dhigaysaa shaqadiisii, markaa sidee u dhigi kartaa kabadhka musqusha meel yar? Jawaabtu waa - in la dheereeyo. Kobcinta asalka ah ee asalka ah ee qaabka tooska ah. Waa cad cad oo dhalaalaya oo caato ah oo gidaarka sudhan, sidaasna ku sii daaya meesha musqusha. Qaabkeedu waa heer sare oo casri ah.
Muraayadda musqusha ee muraayadda
Ku rakibidda muraayad dusha sare ee kabadhka musqusha waxay ku habboon tahay in lagu ballaariyo booska musqusha yar. Sababtoo ah waxay isku daraan laba hawlood hal, kaliya ma badbaadiyaan booska iyo qiimaha rakibidda muraayadda, laakiin sidoo kale waxay adeegsadaan mabda'a muraayadda si loo kordhiyo saamaynta daawashada ee musqusha oo dhan.
Jidhka unugga isku -darka
Isku dar alaabta musqusha ee kala duwan sida musqulaha, saxanka iyo armaajada musqusha si aad u samaysato halbeeg dhan. Kani waa doorasho weyn oo loogu talagalay musqulaha yaryar ee casriga ah waana isbeddel caan ku ah nolosha magaalooyinka ee Yurub iyo Ameerika maanta.
Haanta biyaha ee musqusha ayaa lagu rakibay kabadhka musqusha. Biyaha weelka sare ku jira waxaa lagu kaydiyaa haanta. Way isku cufan tahay weyna fududahay qaabka. Kani ma aha oo kaliya mid si weyn u banneeya boos, laakiin sidoo kale wuxuu hagaajiyaa hufnaanta isticmaalka biyaha, oo ah cagaar iyo bay'ad u fiican.
Qolka maydhashada iyadoo la isticmaalayo afar jibbaaran
Meel yar oo madaxbannaan oo musqusha ah, qolka qubeyska oo si xun loo dhigay ayaa ka dhigi kara musqusha mid cidhiidhi ah oo ciriiri ah. Doorashada caanka ah ee maanta waa in la isticmaalo qol ama meel bannaan oo qaloocan musqusha. Ku -rakibidda qubeyska leh xuduud qaab -dhismeed oo mugdi ah ama aan lahayn qaab afar -meeloodle ah ayaa hoos u dhigi karta madax -bannaanida qubayska oo ka dhigi karta inay ku dhex milmaan musqusha xagga aragtida.
Isticmaal shaashadaha qubeyska halkii aad ka isticmaali lahayd daahyada qubeyska
Qolka musqusha ee bannaan, dadku waxay inta badan u arkaan daahyada qubeyska inay ku habboon yihiin inay isticmaalaan oo daboolaan aag yar. Dhab ahaantii, daahyada qubeysku waxay jebin karaan daacadnimada booska waxayna musqusha ka dhigi karaan mid u muuqanaysa claustrophobic iyo cuf. Shaashadda qubeyska halkii ay ka ahaan lahayd daaha qubeyska sidoo kale waa doorasho caan ah maanta. Shaashadda qubeyska ayaa si fudud u kala saari karta meelaha qoyan iyo kuwa engegan, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa in iftiinka la ballaariyo oo musqusha oo dhan ay noqoto mid ifaysa oo ballaaran.
Ku rakibidda hiitarka jaranjarada toosan
Hiitarka jaranjarada toosan wuxuu u raraa meesha musqusha kor iyo hoos halkii uu ku fidin lahaa dhinaca bidix iyo midig, sidaa darteed waxay u badan tahay inay keydiso meel ka badan naqshad jiifsan ama qaloocan. Intaa waxaa dheer, hiitarayaasha jaranjarada kulul waxay shukumaanada diirimaad iyo raaxo ku hayaan. Waxa kale oo ay noqon doontaa mid aad u sahlan marka aad soo saareyso tuwaalada.
Iftiimiya midabka musqusha
Musqulaha bannaan ee yar -yar guud ahaan kuma haboona waxayna isticmaalaan midabbo kala duwan. Midabo aad u badan oo la isku daray ayaa ka dhigaya meesha bannaan inay u ekaato wasakh iyo ciriiri, sidaa darteed waxaa fiican inaad u isticmaasho midabyo adag nidaamka midabka musqusha. U isticmaal darbiyada cad ama buluug khafiif ah si aad u wanaajiso milicsiga iftiinka ee musqusha. Dabaqyada leh midabada madow waxay soo saari karaan saamayn xoog leh oo ka soo horjeeda derbiyada waxayna ballaariyaan dareenka meel bannaan ee musqusha oo dhan.
Fidinta saamaynta aragtida foornada
Musqul bannaan oo yar kuma haboona in la isticmaalo foornooyinka cabbirka weyn. Taa bedelkeeda, waxaad ku isticmaali kartaa marmarka cabbirka yar derbiga musqusha si aad u fidiso xariiqda toosan, taasoo ka dhigaysa in boosku u muuqdo mid dheer oo aad u ballaaran, si geesinimo lehna u isticmaal khadadka toosan si aad musqusha u eegto mid sare. Saamaynta milicsiga ee sagxadda foornada ayaa iyaduna muhiim ah, oo dusha sare ee dhalaalaya oo cad ayaa u badan inay ballaariso aragtida saamaynta kala fogaanshaha.
Hore:: Iftiinka Meesha Musqushaadu ma ku fiican tahay? Next: 6 Layouts oo Caan ah oo lagu dabaqi karo Musqul kasta laga bilaabo 3-9m2. Markay Jaarku Eegaan, Dhammaantood Waxay Doonayaan Inay Dhigaan Darbiga Oo Dib U Dhigaan!
2021 / 09 / 25 2317
2021 / 09 / 24 2293